Momba anay - WUXI KS IMPORT AND EXPORT LIMITED Company
Wuxi KS Import And Export Limited Company dia Orinasa misahana manokana amin'ny fanafarana sy ny fanondranana ny milina lamba sy ny mekanika.
Ny departemantan'ny varotra ivelany dia natsangana tamin'ny taona 2017. Tao anatin'izay taona vitsy izay, niaraka tamin'ny fanampian'ny toerana jeografika ambony (mifanila amin'ny haben'ny seranan-tsambon'i Shanghai) sy ny fianarana an-taonany maro sy ny fikarohana momba ny milina lamba ny fifandraisana sy adihevitra momba ny orinasa Ny injeniera dia namorona ekipa ekipa faran'izay tsara amin'ny fisafidianana vokatra, fanaraha-maso kalitao, varotra ary fivarotana aorin'izany.
Manam-pahaizana amin'ny famolavolana, ny fanenomana, ny stenter, ny milina milina Carprt isika (toy ny Pin Spacer, Cradle, Twister Twister, tariby sifotra, Pick Roller, Tpu Membrane, Roller Bearing, Gripper, Automatic Winder Parts, Brake Lining, Guide Hook, Borosy Stenter, Pulley sns.)
Miantehitra amin'ny traikefa efa an-taonany maro, efa mihoatra ny 1000 ny karazana fitsinjaram-pahefana novolavolainay. Ny orinasanay mifanaraka amin'ny hatsarana, ny fahadiovam-po, ny fitsipiky ny mpanjifa voalohany, dia niaraka tamin'i Italia, Switzerland, USA, Thailande, Vietnam, India, Iran, Indonezia sy firenena hafa hahatratrarana ny marimaritra iraisana amin'ny fiaraha-miasa maharitra. Ary manantena izahay fa amin'ny ho avy dia afaka manome vokatra sy serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny firenena maro samihafa izahay！
Mpiasa vahiny manerana an'i Azia, Eropa, Moyen Orient, izay afaka manome serivisy aorian'ny varotra aorian'ny asa aman-draharaha.
Manana fomba roa iaraha-miasa izahay:
1 - izahay no masoivohonao any Shina
2 - afaka mifidy sy mivarotra ny vokatrao izahay
faritoo fa manangana izahay!
wuxi ks Hiaraka aminao foana!
Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia ny fikatsahana hatrany.
eto izahay ho an'ny serivisinao rehetra, mifandraisa aminay anio!
-Ny kalitaon'ny vokatra dia miteraka fahasimbana
-Miorina amin'ny fahatsoram-po, ny mpanjifa aloha
-Fandraisana andraikitra ekipa matanjaka
Serivisy an-tserasera 24-ora
-Ny vokatra sasany manohana ny fanamboarana
-Vazava vaovao sy fahitana mampientanentana
-Fanampiana ifanampiana, fanampiana iraisana ary fiaraha-miasa mandresy
-Mikaroha amin'ny fotoana ary mandrosoa ho amin'ny ho avy ·